Orinasa famokarana fanaka sy fampifangaroana entana amidy any Dubai - BusinessFinder.Me
Ilain'ny mpampiasa vola # 30 isan-jato ny fiverenana isan-taona. FAHAMARINANA ny fandraharahana fanamboarana fanaka sy fandrahoan-tsakafo manitatra ny trano famokarana ao Dubai. Sandan'ny fampiasam-bola: 3 tapitrisa USD (AED 11 tapitrisa) Mampiasa vola amin'ny orinasam-pandraharahana mampidi-bola, mihazakazaka, ...
Ilaina ny mpampiasa vola
#30 isan-jato ny fiverenana isan-taona.
FAHAMARINANA ny fandraharahana fanamboarana fanaka sy fandrahoan-tsakafo manitatra ny trano famokarana ao Dubai.
Sandan'ny fampiasam-bola: 3 tapitrisa USD (11 tapitrisa AED)
Mampiasa vola amin'ny raharaham-barotra mampidi-bola, mihazakazaka ary mahazo tombony. Hatreto aloha:
# 15 taona amin'ny Business
# AED 6M sandan'ny kaomandy antonony
# 10 Salanisan'ny Kaomandy/Taona
Raha mila modely ara-bola sy fampahalalana hafa dia mifandraisa amin'ny Investor Needed
# franchise manadio
# franchise franchise cart
#Orinasa fanamboarana fanaka sy fanaka hamidy
#Orinasa fanamboarana fanaka sy fanaka amidy any Dubai
#Orinasa fanamboarana fanaka sy fanaka amidy any uae
#Mivoaka amin'ny varotra orinasa
#Running Furniture sy orinasa mpamokatra entana amidy any Dubai
#Fampandehanana fanaka sy orinasa mpanamboatra hazo amidy any UAE